Aragtida Ganacsiga - Hebei Cilmiga Ku-saleysan Teknoolojiyadda Caafimaadka Co., Ltd.
Dhis dhisme adeeg caafimaad oo casri ah
Ku tiirsanaanta hay'adaha xididdada aasaasiga ah iyo xogta weyn ee caafimaadka internetka,
Ku dadaal inaad dhisato "isbitaal, dhakhtar, qoys, shaqsi", "Dad, nolol" oo ah mid ka mid ah meheradaha adeeg caafimaad ee cilmiga deegaanka.
Dhiirrigelinta Isbahaysiga Caafimaadka ee kala-ogaanshaha cudurka iyo siyaasadda daaweynta
Aniga oo ka faa'iideysaneyna faa'iidooyinka wadaagista waqtiga-dhabta ah ee macluumaadka iyo macluumaadka u dhexeeya Unicom sare iyo hoose, Dhisida midow caafimaad oo qulqulaya xog firfircoon guriga "isbitaalka dhakhtarka" iyo "bukaanka takhtarka ah", Iyo ogaanshaha kala duwanaanta iyo adeegga adeegga daaweynta. .
Ku celceli hal-abuurnimo caafimaad iyo horumar
Iyada oo taageero ka heleysa Machadka Shenzhen ee teknolojiyadda horumarsan, Machadka Shiinaha ee Sayniska ee Shenzhen Graduate School of Harbin Institute of Technology Academic iyo taageero farsamo oo laga helo Isbitaalka Xuanwu ee Jaamacadda Caafimaadka ee Jaamacadda, ku tababbart qaabka cusub ee hal-abuurnimada caafimaadka iyo horumarka, kuna dadaal inaad si fiican u sii wanaagsanaato- ahaanshaha caafimaadka qaranka.
Xalliyaan dadka caamka ah
Way adag tahay in dhakhtar la arko. Waa qaali Dhisme "isbitaal hor leh, oo ku yaal isbitaalka iyo isbitaalka dhakhtarka kadib" iyadoo la dhisayo maareyn ballaadhan oo maaraynta cudurada raaga
Nidaamka adeegga ee meertada nolosha ayaa hagta qulqulka ilaha caafimaadka ee tayada sare leh, Waxaan si dhameystiran u xallin doonnaa dhibaatada ay ku adag tahay dadka caadiga ah inay arkaan dhakhtar, laakiin qaali ku ah inay arkaan dhakhtar.